Madaxtooyadda Somaliland Oo Si Rasmi ah u Shaacisay Heshiiska Shirkadda DP World iyo Xukuumadda Dhex Maray – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku saxeexan yahay afhayeenka madaxtooyadda Xuseen Dayr ayaa lagu shaaciyey heshiiska dhex maray xukuumadda Somaliland iyo shirkadda dekedaha ka shaqaysa ee DP world oo maanta ka dhacay magaaladda Dubai.
Heshiiskan waxaa si rasmi ah qalinka ugu duugay wasiirka Arimaha Dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, waxaan goob-joog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Md. Cabdiraxmaan Saylici. War-saxaafadeedkan ayey xukuumadda Somaliland si rasmi ah ugu shaacisay inay heshiiskaasi dhacay. War-saxaafadeedkan ayaa u dhignaa sidan:
“Maanta oo ay Taariikhdu tahay 05.09.2016 waxa si rasmi ah qalinka loogu duugay Heshiiskii Casriyeynta iyo Ballaadhinta Dekedda Caalamiga ee Berbera kaasoo u Dhexeeyey Dawladda Imaaraadka Carabta iyo Jamhuuriyadda Somaliland. Heshiiska dhex maray laba dhinac nuxurkiisu wuxuu ahaa in Shirkadda DP World oo laga leeyahay Dubai (UAE) ay maalgaliso Marsada Caalamiga ah ee Berbera (BPA).